Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Ethiopian Airlines: U duuli Enugu, Nigeria hadda
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Itoobiya • News • Wararka Nigeria • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Rakaabka ka imanaya afarta irdood ee ay leedahay Ethiopian Airlines - Lagos, Abuja, Kano iyo Enugu - waxay hadda haystaan ​​fursad ay ugu duulaan in ka badan 130 goobood oo caalami ah oo Itoobiyaan ah oo ku yaal shan qaaradood.
Ethiopian Airlines waxay dib u bilaabi doontaa adeegyadii rakaabka ee toddobaadlaha ahaa ee loo qorsheeyay Enugu, Nigeria laga bilaabo Oktoobar 9, 2021.
Rakaabka ka imanaya Enugu waxay yeelan doonaan xiriir toos ah oo duulimaad ah meelo badan oo adduunka ah.
Nayjeeriya waligeed waxay ahaan jirtay welina waxay ka mid tahay meelaha muhiimka ah ee Itoobiya ay ku aaddo Galbeedka Afrika.
Ethiopian Airlines Group, oo ah diyaaradda ugu weyn ee Pan-African, ayaa dib u billowday adeegyadii rakaabka ee toddobaadlaha ahaa ee Enugu, Nigeria laga bilaabo 09 Oktoobar 2021. Duulimaadyada waxaa la sameeyaa Arbacada, Jimcaha iyo Sabtida. Ethiopian waa mid ka mid ah maraakiibta ugu da’da weyn ee u duulaya Nigeria waxayna u adeegaysay dalka tan iyo 1960 -kii, iyadoo xoojinaysa xiriirka ganacsi, dhaqan iyo dalxiis ee u dhexeeya Nigeria iyo adduunka intiisa kale.
Rakaabka ka imanaya Enugu waxay yeelan doonaan xiriir toos ah oo duulimaad ah meelo badan oo Afrika ah, Bariga Dhexe, Aasiya, Koonfurta Ameerika iyo Yurub oo leh baaxad weyn Ethiopian Airlines shabakad iyo maraakiib casri ah.
Mr. Tewolde GebreMariam, Maamulaha Kooxda ee Ethiopian Airlines wuxuu yiri “Nigeria had iyo jeer way leedahay
ahaa welina ahaado mid ka mid ah meelahayaga muhiimka ah ee Galbeedka Afrika. Waxaan si joogto ah u hagaajineynaa badeecadaheena iyo adeegyadeena si aan u daboolno rajada macaamiisheena iyo dib u bilaabista adeegyada Enugu ayaa fure u ah inaan gaarno macaamiisheena qeybaha kala duwan ee Nigeria. Waxaan u mahadcelineynaa dadka iyo dowladda Nigeria taageeradooda joogtada ah ee dib -u -bilaabista adeeggayaga Enugu. ”
Rakaabka afarta albaab ee Nigeria - Lagos, Abuja, Kano iyo Enugu - hadda waxay haystaan ​​fursad ay ugu duulaan in ka badan 130 goobood oo caalami ah oo Itoobiyaan ah oo ku yaal shan qaaradood. Ethiopian -ku wuxuu noqday diyaaraddii ugu horreysay ee caalami ah oo u duusha Enugu markii ay duulimaadka bilowday 2013. Adeeggii Enugu wuxuu hakad ku jiray muddo laba sano ah iyadoo garoonka dayactirku ka socday.